I-Huawei P10 ityala lejaji epheleleyo ephathekayo
Inkcazo:Ikhosi yejaji yeHuawei P10,Umshayeli weNkundla yeHuawei yangaphandle,I-polisi ye-Li-polym Huawei P10
Home > Imveliso > Ityala leBattery laseHuawei > I-Huawei P10 ityala lejaji epheleleyo ephathekayo
Umzekelo No.: Huawei P10 Battery Case
Icandelo lejaji yeHuawei elichazwe ngamaccebiso okulandelela:
[UKUSEBENZISA NOKUKHOKELA KWAMANDLA AMANQAKU] : I-TPU ye- TP ekhuselekileyo inika ukukhuselwa komzimba ngokupheleleyo; Izikhupha zangaphakathi ezikhuselekileyo zingavimbela i- Huawei ibhethri kwimeko yokufutshane, ukutshisa nokugqithisa.
[UKUSEBENZISA] : Kulula inkinobho ye-ON / OFF kwimva ukuqala okanye ukuyeka ukuhlawula. Icandelo lebhetri ye- smartphone ye- Huawei kulula ukuyisebenzisa kwansuku zonke kwaye unokwethenjelwa ngokwaneleyo ukuba ubekho ngenxa yeemeko zengxamiseko.
I- Case Huawei P10 yeShaja inamandla okwi-4000mAh, i-warranty yonyaka we-1 kwaye idluliselwe izatifikethi ze-CE / RoHS / FC / PSE. Zonke i- Huawei P10 yeshaja yocingo iya kuqhuba inkqubo yokuhlola ngokucokisekileyo ukuqinisekisa ukuba bonke baphumelele phambi ephuma kumveliso.
Ikhosi yejaji yeHuawei P10 Umshayeli weNkundla yeHuawei yangaphandle I-polisi ye-Li-polym Huawei P10 Icandelo lejaji ye-Huawei P10 Ingxaki yeBattery yeHuawei P20 Ibhetri yeHuawei Mate P10 Icandelo lejaja yeHuawei Imiba yefoni yeHuawei